Ukulinganisa izithunzi kunye nezibane ngeFotohop ngendlela eyiyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngokwenyani imodeli yezithunzi kunye nokuqaqamba ngeFotohop
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Ukufota, Tutorials
Izithunzi zemodeli kunye nezinto eziphambili Photoshop ngokwenyani yinkqubo ebalulekileyo yokufezekisa ubunyani obukhulu kwimifanekiso yakho Nokuba ungumfoti okanye hayi, ukufumana ifoto enobuntu kufuneka udlale kakuhle ngezibane kunye nezithunzi zomfanekiso. Photoshop ivumela ukuba senze phantse yonke into kwinkqubo ukuphinda usebenzise idijithali, Izibane zemodeli kunye nezithunzi yenye yezinto esinokuzenza ngokulula.
Amaxesha amaninzi uyakuba nomfanekiso onomahluko omncinci phakathi kwezibane kunye nezithunzi okanye i-montage ayizukufumana ubunyani ngenxa yokunqongophala kolo dibaniso kunye nezithunzi, yiyo loo nto kubaluleke kangaka. yazi indlela yokwenza umzekelo kwiFotohop. Ngeli qhinga uya kufunda ukuyenza ngokungathi ubepeyinta umfanekiso ngebrashi.
ukuba yenza izithunzi kunye nezibane into yokuqala esiyifunayo yazi umfanekiso wethu kwaye ucinge ukukhanya kukuchaphazela njani ukufezekisa ubunyani obukhulu (kwimeko yokufuna ubunyani) sakuba sazi ukuba izibane nezithunzi ziwuchaphazela njani umfanekiso wethu, siya kusebenza kuwo Photoshop. un iqhinga lokwazi ukuba zenziwa njani izibane nezithunzi Inokubandakanya ukukhanya kwinto kwaye ubone ukuba zenziwa njani izithunzi kunye nezibane, ukuba sifuna ubunyani kufuneka silumke kakhulu ngale nxalenye.
Ukudala amanqaku aphezulu kunye nezithunzi kulula kakhulu kodwa kuthatha ixesha elininzi lokuphinda kulungiselelwe kwaye kucwangciswe, kule meko Siza kusebenzisa izixhobo ezibini kuphela ze Ifotohop:
Uhlengahlengiso Lweyile / Ijika / amanqanaba
Siqala ngokukhetha umaleko wefoto yethu, emva koko senze ifayile uhlengahlengiso lomaleko / ijika kwaye sibeka lo maleko phinda imowudi. Xa sisenza le nxalenye yokuqala, umfanekiso wethu uza kuba mnyama, ngenxa yeso sizathu kufuneka sinike ulawulo + i ukubuyisa umva isiphumo kunye nobulungisa mnyama ezo ndawo sizipeyinta ngebrashi. Xa sele sinomaleko oguqulweyo, into ekufuneka siyenzile kukuqala ukupeyinta ngebrashi esefotweni. Ukufezekisa ubunyani obukhulu kule nkqubo kuya kufuneka sidlale ngexabiso loku: ukukhanya, ukuhamba kunye nokuqina kwebrashi yethu.
Ukwenza izibane emfanekisweni Kuya kufuneka senze njengakuqala kodwa senze ifayile ye uhlengahlengiso lomaleko / ijika en imo yesiqwenga. Sisebenzisa izibane kunye nezithunzi kancinci kancinci de sifezekise isiphumo esifunekayo. Ukuba sifuna izithunzi ezinzima sinokwenza ifayile uhlengahlengiso / amanqanaba en phinda imowudi kwaye siya kufumana ubumnyama ngakumbi ngenxa yezithunzi zethu.
Njengoko sibona inkqubo yokumodareyitha izithunzi kunye nezibane zomfanekiso yinto elula kodwa efuna ucwangciso, Ukufunda kwangaphambili kwezibane kunye nokuziqhelanisa ukufumana esona siphumo siyinyani. Imfihlelo yoku ilele ekwenzeni, ukuziqhelanisa, nokwenza ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Ngokwenyani imodeli yezithunzi kunye nokuqaqamba ngeFotohop
Isitayile seRetro Brushes seAdobe Photoshop